Ukuvavanya i-HTC Desire S (I) | I-Androidsis
Enkosi ku-HTC sibe nethuba lokuvavanya uphawu lwakutsha nje lwe-HTC, i HTC Isifiso S. Basithumele isiphelo sendlela endiya kuba nethuba lokonwaba kwaye ndiza kuvavanya kweli nqaku, nakwabanye, ngesixhobo. Okokuqala, ndiza kugxila kwizixhobo kunye nezinto eziziswa sisiphelo sendlela, ekujoliseni kamva kwisoftware kunye nendlela esebenza ngayo ifowuni.
Esi sigxina sinoku kulandelayo hardware:
Isantya se ICPU 1 IGz
Memoria i-ROM1.1 Gb
Memoria i-ram: 768 Mb
Isikrini 3,7 Inch touch SLCD enesisombululo se-480X800
OS: Android 2.3.3 (Isonka sejinja kunye nokuVavanyelwa Imvo 2.1)
Igumbi eliphambili (Ngasemva): 5 Mpx ngokugxila ngokuzenzekelayo kunye nefleshi ye-LED. HD 720p ukurekhodwa
Ikhamera yangaphambili Ingqungquthela yevidiyo yeVGA.
Ukwandiswa kweslot ngekhadi le-Micro SD (SD 2.0 iyahambelana)
Isinxibelelanisi seAudio Stereo 3,5 mm
Micro I-USB esemgangathweni Iphini emi-5
1450 mAh ibhetri egcwalisekayo.
Izixhobo ukusondela, ikhampasi, ukukhanya okukufutshane kunye ne-G-Sensor
Iindidi zenethiwekhi ezixhaswayo: HSPA / WCDMA. Ibhendi ye-Quad 850/900/1800/1900 Mhz
Conectividad Bluetooth 3,0 ngeFTP / OPP yokuhambisa ifayile
I-A2DP Ukunxibelelana kweefowuni engenazingcingo
IPBAP evumela ukunxibelelana ne-Ajenda evela kwikhithi yemoto.
Львів, 802.11b / g / n
Ubunzima bethutyana: 130 g kunye nebhetri
Imilinganiselo: Ukuphakama kobubanzi bobubanzi: 115 59,8 11,6 mm
Isiphelo siza ne izindlu zentsimbi emnyama ipisi enye. Ngasemva izisa iziqwenga ezimbini zeplastiki ngesiphelo esiqhelekileyo seHTC matte, sithambe kakhulu ngaphandle kwebala. Amaqhosha evolumu kunye namandla enziwe ngeplastikhi ebengezelayo yesilivere. Inkqubo ye- iseti yentloko nayo iya kuza kwigridi ukukhumbuza iimodeli ezinje nge-EVO okanye iiterminal zelizwekazi laseMelika nge4G esingenayo apha. Ijongeka ngathi yi uyilo olunomtsalane noluyimpumelelo. Nangona kuyinyani, ukuba kwimeko ezininzi ze-HTC, ukuvula isiciko ukususa i-SIM okanye i-Micro SD yinto enzima. Kule terminal ushiya isikhonkwane sakho uzama ukusivula kwaye xa usivula, kuvakala ngendlela ebonakala ngathi wophule into. Isiciko asihlali kakuhle kwaye senza ingxolo. Kubonakala kum njengesiphene esinzulu kumgangatho wokugqiba ukuba i-HTC kufanele ukuba ibikhathalele ubuninzi.
Ngokweenkcukacha zomenzi, Ibhetri ye-Li-Ion ye-1450mAh iya kuba ne ubude bencoko ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-590 kwinethiwekhi ze-GSM kunye nemizuzu engama-435 yeWCDMA. Ibanjiwe Amaxesha obomi bebhetri anokufikelela kwiiyure ezingama-455 kwi-WCDMA kunye neeyure ezingama-430 kwi-GSM. Andikwazi ukulichaza ngokuchanekileyo eli candelo. Kudala ndijonga ukusebenza kwaye ibhetri iyahlupheka. Okwangoku kubonakala kulungile kum, kuba ihlale malunga neeyure ezili-12 ukusuka kumthwalo opheleleyo kunye nexesha elaneleyo lokuvula iscreen, iividiyo, umculo, ukukhangela, ... Njengokuba ixesha elidlulayo liza kuba neendlela ezininzi malunga eli candelo.
Isikrini silingana ngokulinganayo, 3,7, iSLCD, kuleyo yoMnqweno wokuqala. Uhlobo olufanayo olungafaniyo ngemibala, mhlawumbi i-Desire S inokukhanya okungakumbi. Ukuba ndiyibonile loo nto kwi iimeko zangaphandle ekukhanyeni okuqaqambileyo uMnqweno S uphulukana nawo iphulukana nokubonakala engenzekiyo kuMnqweno. Ubungakanani, ngokoluvo lwam, buchanekile kwisisombululo esisizisayo. Ngaphezulu kobu bungakanani kwizisombululo ze-800 × 480 zibonakala zigqithile kum kwaye ipikseli kwifowuni iqala ukubonakala. Inkqubo ye- Impendulo ethambekayo ilungile kakhulu. Ilungile kwiimeko ezininzi kwindawo ocofa kuyo.
La Iphaneli yeqhosha elisezantsi lichukumisa, kwaye uphendula kakuhle kwiqhosha. Izibane zikhanyise ngokuzenzekelayo kwiindawo ezikhanyayo kwaye ucime izibane kwiindawo eziqaqambileyo. Inkqubo ye- I-multicolor ekhokelwe okubandakanya indawo ephezulu yesikrini kuza kumgca weetheminali zeHTC, ziluncedo kwiimeko ezininzi. Izinzwa ziya kuba ngasekhohlo phezulu kwifowuni, Izibane ezikhanyayo kunye nokusondela. Zombini zisebenza ngokugqibeleleyo kwaye zenza imisebenzi yazo, nanini na sifuna. Izibane ezizenzekelayo zisebenza kakuhle kwaye zikhawuleza ngokukhawuleza kutshintsho lokukhanya kunye nabanye.
Ngokunxibelelana ngefowuni, inayo yonke into onokuyilindela. I-HSPA kunye neBluetooth 3.0 iyahambelana ne-A2DP kunye ne-PBAP onokuyisebenzisa ukuba unezixhobo ezifanelekileyo. IGPS yeyokusebenzisa isikhangeli sakho ukhetho okanye iGoogle Navigator esebenza kakuhle. I-Wifi b / g / n ukuze ukwazi ukonwabela unxibelelwano lwe-Intanethi ngaphakathi kwekhaya lakho. Ingxaki yokuqala endiye ndadibana nayo kwaye ibonakala ngathi inzima, xa ndibeka isandla sam phezulu, ecaleni kwescreen, isixhobo siphulukana nokugubungela i-wifi, malunga ne-30%. Singajongana nenye 'i-anti-anti'. Andazi ukuba ngumcimbi wesoftware (ndiyayithandabuza) okanye izixhobo zekhompyutha, kodwa kubonakala ngathi yimpazamo embi kum. Vula ukugubungela mobile (ngelishwa endlwini yam ayilunganga kakhulu) le fowuni iphuma ilungile. Inomgangatho olungileyo apho ezinye iitheminali zilahleka khona. Yinqaku labo.
Isiphelo sendlela iza nonomathotholo kunye ne-3.5mm eyintloko. Ndizamile ifayile ye- umgangatho weaudio yintoni, kwaye ikho exelente. Kubathandi bomculo ndiqinisekile ukuba iya kukunika iiyure kunye neeyure zokumamela umculo wakho owuthandayo kwaye uya kuba nakho ukuwumamela ngomgangatho ophezulu. Ukufakwa kukanomathotholo kuhloniphekile, kuhlala kuxhomekeke kwii-headphone ozisebenzisayo, kodwa nge-HTC eyayo ithatha kakuhle. Ii-headphone zezi i-HTC ifake kwiimodeli zayo, kunye Iphedi yamaqhosha kwimakrofoni ukutshintsha iingoma kunye nokuthatha ifowuni.
Ngamafutshane, yi uhlaziyo lweNqweno yokuqala yeHTC, ngaphandle kokunye. Ndinayo enye ingxelo entle kakhulu yeyiphi igalelo lesiphelo ngokusingise kwinto eyandulelayo. Ewe kulungile, ayisosiphelo esiphakamileyo kakhulu njengoko iya kuba yiGPS SII okanye i-Optimus 2X eneprosesa engaphakathi kunye nabanye, kodwa ayikho kwixabiso layo. Kubonakala kum ukubheja okulumkileyo ukuvuselela i-terminal kunye neebugs ezazinqwenelwa nguMnqweno wokuqala. Imemori engakumbi ye-RAM kunye neROM kunye nephedi yamaqhosha ihlaziyiwe ngokupheleleyo, Keypads ezinike iintloko ezininzi kubasebenzisi bazo. Kwizithuba ezizayo, ndiza kuvavanya isoftware kunye neHTC Sense 2.1.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » Ukuvavanya i-HTC Desire S (I)
Ukunyaniseka, yenye yezona ndawo zintle kakhulu ezikhoyo ngoku kwintengiso, ngokoluvo lwam. Ndizakutshintsha iiterminal ngaphandle kwexesha kwaye olu khetho lubonakala lulungile kum kuba andijongi kwisiphelo sendlela-ezimbini kuba andidlali kwaye andizukuyisebenzisa. Okwangoku ndineNexus One, ngaba ndiza kuqaphela utshintsho ??? Ngaba uyayicebisa? Enkosi, ungandwendwela iBhlog yam nanini na ufuna, uya kwamkeleka !!!
Imakethi ye-Android igqithile kwiVenkile yeApple ngenani lezicelo zasimahla